network devices များအကြောင်း..
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Network Engineering » network devices များအကြောင်း..
1 network devices များအကြောင်း.. on 28th December 2009, 10:15 am
ကျွန်တော်မေးခြင်တာတွေရှိလို့တင်လိုက်တာပါ ကျွန်တော် ၀င်ဆွေးနွေးဘို့ လိုက်ရှာတာ မတွေ့ရလို့ပါ.. အဆင်မပြေရင် ဒီဟာကို ဖြတ်လိုက်လို့လည်းရပါတယ်...
ကျွန်တော် တို့ မြန်မာနိုင်ငံ က network ပိုင်းလိုက်စားတဲ့ လူတွေတော်တော်များဟာ network ပစ္စည်းတော်တော်များများကို စုံစုံလင်လင်မတွေဘူးကြပါဘူး..
အဲဒါကြောင့် ဒီဖိုရမ်မှာရှိတဲ့ ကျွမ်းကျင်ကြတဲ့လူတွေက network device တွေ အကြောင်းရှင်းလင်းပေးဘို့ တိုက်တွန်းရင် တင်လိုက်တာပါ..။ LAN မှာသုံးတာတွေ
တော့သိတဲ့လူများပေမယ့် WAN မှာသုံးတဲ့ devices တွေကို မသိကြပါဘူး... ပြီးတော့ LAN မှာသုံးကြရင်လည်း.. ဖြစ်သလို့ သုံးကြပါတယ်.... တိတိကျကျ
network ပစ္စည်းတွေနဲ့ သုံးတာ သိပ်မရှိပါဘူး.. သိတဲ့လူများရှိရင် ရှင်းလင်းပြေကြပါ...
2 Re: network devices များအကြောင်း.. on 29th December 2009, 8:29 pm
ဒီအကြောင်းကို Networking & Internet ထဲမှာ ဆွေးနွေးရင် ပိုသင့်တော်မယ်ထင်ပါတယ်။
3 Re: network devices များအကြောင်း.. on 31st December 2009, 3:58 pm
mrzoelay wrote: ကျွန်တော်မေးခြင်တာတွေရှိလို့တင်လိုက်တာပါ ကျွန်တော် ၀င်ဆွေးနွေးဘို့ လိုက်ရှာတာ မတွေ့ရလို့ပါ.. အဆင်မပြေရင် ဒီဟာကို ဖြတ်လိုက်လို့လည်းရပါတယ်...
ကဲ ကဲ ဘယ်ပစ္စည်းကစပြီးသိချင်လဲ?
တတ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဝိုင်းရှာပေးပြီးဝိုင်းဆွေးနွေးပေးမယ်လေ။ Device တွေကများလွန်းလို့ပါကွယ်။
4 Re: network devices များအကြောင်း.. on 5th January 2010, 6:08 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-12-23
10Base5 နဲ့ 10Base2 Ethernet Cabling System တွေမှာ သူတို့ ရဲ့ distance တွေ၊ limit nodes တွေဟာ သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင်.....
10Base5 မှာ Distance က 500m ပါ။ နောက်ပြီး 100 nodes ထက်ကျော်လို့မရပါဘူး။
10Base2 မှာဆိုရင် 185m နဲ့ 30 nodes ထက်ကျော်လို့မရပါဘူး။
အဲဒီတော့ တကယ်လို့ 10Base2 နဲ့ nodes အလုံး 100 ရှိတဲ့ network တခုကို ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင်.......အခက်ကြုံရပါပြီ။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် network device တွေပေါ်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တခုက fault tolerance ပါ။ network device တွေမပါပဲ သူ့ချည်းပဲချိတ်မယ်ဆိုရင် falt tolerance က ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ပြောတာကို နားလည်ခြင်မှ နားလည်ပါလိမ့်မယ်။
Network တခုမှာ nodes 10 လုံးရှိပါတယ်။ hub တွေ switch တွေမပါပဲ။ ရိုးရိုး 10Base5 Ethernet system ကိုအသုံးပြုပြီး ချိန်ထားတယ်ဆိုရင် အကယ်လို့ No.3 nodes က down ရင် ကျန်တဲ့9လုံးစလုံး down မှာပါ။ ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ nodes တွေအားလုံးဟာ ဘာ device မှ မခံပဲ တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက်ထားခြင်းကြောင်းပါ။ အဲဒီတော့ Repeater၊ Hub၊ Switch၊ Bridge၊ Router စတဲ့ layer 1,2,3 မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ device တွေပေါ်လာပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော် Repeater က စပြီးတခုခြင်းဆီ ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောပါ့မယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောတာ မှားခဲ့တာရှိ ရင် ဝင်ရောက်ထောက်ပြပြီးဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း လေ့လာနေသူ ဆိုတော့ အလုံးစုံမှန်ချင်မှ မှန်ပါလိမ့်မယ်။
etwork Device တခုဖြစ်ပြီး layer 1 မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Ethernet segment က transmit လုပ်တာတွေကို recieve လုပ်ပြီး another ethernet segment ကို retransmit ပြန်လုပ်ပေးခြင်းပဲဖြစ် ပါတယ်။ ဝင်လာတဲ့ electrical signal တွေကို binary code တွေအဖြစ်ပြောင်းပြီး၊ ပြီးတော့ electrical signal တွေပြန်ထုတ်ပေးပါတယ်။
နောက်တခုက distance ပါ။ Distance ကို ကိုယ်လိုချင်သလောက် လုပ်ယူလို့ရပါတယ်။ အကယ်လို့ 10Base2 Ethernet system မှာ 300 m ကိုချိတ်ချင်တယ်ဆိုရင် တဖက်ကို 150m ဆီခွဲပြီး အလည်မှာ repeater ခံပြီးချိတ်ဆက်ခြင်း အားဖြင့် ရပါတယ်။ ကျွန်တော် အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်း 10Base2 ရဲ့ အရှည်းဆုံး distance က 185 ပါ။ တကယ်လို့ 300 m ချိတ်ချင်တယ်ဆိုရင် repater ခံမှဖြစ်မှာပါ။
နောက်တခုက တော့ fault tolerance ပါ။ ဆိုကြပါစို့ဗျာ......
ခင်ဗျားမှာ network တခုရှိတယ်။ nodes 10 လုံးပါမယ်။ distance က 300။ repeater ကိုသုံးမယ်။ repeater ရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းကို network A လို့ပေးပြီး၊ repeater ရဲ့ ညာဘက်ခြမ်းကို network B လို့ပေးမယ်။ တဖက်ကို nodes5လုံးဆီပေါ့။ ဒါဆိုမျက်စိထဲမြင်ပြီထင်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ Network A က down သွားပြီ၊ ဒါပေမယ့် Network B ကတော့ down မှာမဟုတ်ပါဘူး။ repeater ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့် falt tolerance ရှိပါတယ်။
နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ network တခုထဲမှာ different system သုံးလို့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ခင်ဗျားက 10Base2 နဲ့ 10Base5 ကို repeater ခံပြီးတွဲသုံးချင်လည်းရပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ repeater သုံးခြင်းအတွက်ရလာ တဲ့ ကောင်းကျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ွRepeater လိုပါပဲ။ Layer 1 မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ပုံခြင်းကလည်း အတူတူပါပဲ။ Hub တွေဟာ multiport repeater တွေဖြစ်ပါတယ်။ အသေးဆုံး hub မှာ အနည်းဆုံး4ports ပါပြီးတော့ အကြီးဆုံး hub မှာတော့ 48 ports ပါပါတယ်။ တခုပါပဲ။ Hub ကို ချိတ်ဆက်ထားတဲ့5nodes ရှိတယ်ဆိုရင် အကယ်လို့ node 1 ခုdown ရင်တော့ အဲဒီတခုပဲ down မှာဖြစ်ပြီး၊ ကျန်တဲ့ nodes တွေကတော့ ပုံမှန်အတိုင်းဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် hub ကြီးတခု လုံး down သွားရင်တော့ network တခုလုံး down သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
5 Re: network devices များအကြောင်း.. on 19th January 2010, 11:13 am
ကျွန်တော် ကို cramper ကစပြီးသာပြောပြပါ. RJ45 ကိုညှပ်တဲ့ဟာကလွဲရင် မငြင်ဘူးတော့ဘူးဗျာ
6 Re: network devices များအကြောင်း.. on 19th January 2010, 11:21 am
privatene0 အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရေပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေဇူးတင်ပါတယ် ဆက်ပြီတော့ရေးပေးပါအုံဗျာ
7 Re: network devices များအကြောင်း.. on 24th January 2010, 2:31 pm
ကျွန်တော် assignment တစ်ခုလုပ်တုန်းက ရှာထားတဲ့ဟာပါ Network Devices တစ်ခုဖြစ်တဲ့
NIC (Network Interface Card) အကြောင်းပါ
It isacomputer circuit board or card that is installed inacomputer and that it can be connected toanetwork.
It is works on the Layer 1 and Layer2of OSI framework(Open System Interconnection).
Layer 1 is called Physical layer,defines the electrical and physical specifications for devices.
Exactly,it defines the relationship betweenadevice andaphysical medium.
Layer2is called Data Link layer, provides the functional and procedural means to transfer data between network group.
It is an expansion card and two types of data transferring speeds are available now.
It is produced different types of cards that is depend on the Motherboard.
It isanetwork card which connects toaradio-based computer network.
It is also runs on the Layer 1 and Layer2of OSI framework.
It is very useful for desktop computer which is not have wireless card.
For desktop computer,it can connects using the PCI(Peripheral Component Interconnect).
For Laptop and portable computer, it can connects using the USB.
One of the shapes of the WNIC(Wireless Network Interface Card) is small which can plug in USB(Universal Serial Bus) port.
8 Re: network devices များအကြောင်း.. on 28th January 2010, 1:08 pm
ကျွန်တော်တစ်ခုသိချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်... တွေးနေမိတဲ့ အလုပ်လေးတစ်ခုပါ...။
တကယ်လို့ ငါးမိုင်ပတ်လည်ရှိတဲ့ အိမ်ရာတစ်ခုမှာ. ကျွန်တော်တို့ wireless network တစ်ခုဆင်ကြမယ်ဆိုပါတော့ဗျာ
အဲဒီမှာ လိုအပ်တဲ့ devices တွေကို သိခြင်တယ်.. ဘာတွေလိုလောက်လဲ...အဲဒီမှာ သုံးမှာက
internet shared တစ်ခုဘဲ ဆိုတော့. အစစအရာရာပေ့ါ သိသလောက်လေးရှယ်ပေးကြပါဗျာ... server လည်းလိုမယ်ထင်တယ်....
9 Re: network devices များအကြောင်း..